Mhlawumbe abalandeli bemidlalo yesimanje kakhulu noma abasebenzisi bezicelo zobuchwepheshe ngokuvamile abaphendukela ekusebenziseni imithombo ye-RAM ne-CPU, bahlangabezane nomlayezo othize, kufaka phakathi incazelo efana ne "msvcp110.dll: iphutha". Okufanele ukwenze kulokhu, ungaqonda okulula. Kodwa kudingeka siqonde ngokucacile isimo senkinga.
Uhlelo lunikeza iphutha msvcp110.dll: yini engingayenza kuqala?
Okokuqala, udinga ukuqonda ngokucacile, ngokuphathelene nalokho okwenzekayo ukwehluleka okunjalo. Leli fayela lingokwesigaba semitapo edingekayo yezinhlelo ze-Windows, ngaphandle kokuthi, ngokuvamile, ingasebenza, kodwa ngamaphutha. Akuyona into ehlukile kanye nelabhulali eguquguqukayo msvcp110.dll. Iphutha: yini okufanele uyenze kulokhu? Yebo, vele ubuyisele esimweni sayo sokuqala.
Lokhu kwenziwa kusukela kusigaba esilandelayo sePhaneli Yokulawula. Ungasebenzisa indlela elula, okumele ucindezele ukhiye we-F8 ngenkathi uvula uhlelo bese ukhetha ukucushwa kwesistimu esebenzayo kunazo zonke. Izilungiselelo zizochazwa futhi zibuyiselwe ngokuzenzekelayo.
Kodwa inkinga, njengoba ivela, iqukethe amacala amaningi eqinisweni lokuthi ifayela lelabhulali elifunayo lapho uqala umdlalo ofanayo kumakhompuyutha uvele ulahlekile. Eqinisweni, akanalo ithonya ohlelweni, kodwa ekuqaleni kwezinhlelo ezinzima, njengoba bethi, ungena empini.
Ngakho-ke kuvela ukuthi ukwehluleka kwenzeka uma uzama ukuthola umtapo msvcp110.dll (iphutha). Yini okufanele ngiyenze uma ukutakula kungakusizi? Lapha kufanele unciphise ubuchopho bakho kancane.
Iphutha lesistimu msvcp110.dll: yini okufanele uyenze ngokufaka amaphakheji adingekayo?
Enye yezindlela ezilula ukulungisa lolu hlobo lokuhluleka ukufaka iphakethe lensizakalo esemthethweni, elinikezwa kwi-Windows Update Center.
Kwanele nje ukuhlola izibuyekezo kwimodi yebhuku, futhi uma zitholakala (ikakhulukazi izibuyekezo ezibucayi), zivele zidingeke zifakwe.
Ukuvuselela neminye imisebenzi ehlobene
Kodwa izinketho eziphakanyisiwe ngenhla kungenzeka zingasebenzi. Indaba yukuthi uhlelo lufana nokuthi lungacabanga, ukuthi ifayela elidingekayo kukhompyutha. Izibuyekezo zifakiwe, futhi azisebenzi emva kwalokho.
Inkinga ukuthi umtapo we-msvcp110.dll ngokwawo awutholakali (iphutha). Okufanele ukwenze, ukuthi ungalungisa kanjani isimo - imibuzo ebuzwa abasebenzisi abaningi. Ukuze uthole ukuxazulula izinkinga ezilula kunazo zonke, ungakuyala ukuba uthole ifayela elihambisana nesistimu efakiwe yomsebenzisi ngokujulile kokujula, ukulanda bese uyithuthela kwisiqondisi esifanele (ngoba inguqulo engu-64-bit yesistimu yi-directory yeSysWOW64, ye-architecture engu-32-bit - ifolda ye-System32) ekuhlukanisweni kwesistimu Windows.
Yebo, ungaxuba ifayela elilandiwe futhi lapho, kodwa kunendlela elula yokubuyisela izingxenye ezingekho zesistimu. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa umugqa womyalo, yebo, ngamalungelo omlawuli, lapho umyalo ohambelana nawo ucacisiwe. Esimweni sethu, uma kukhona umtapo olayishiwe, udinga ukubhalisa (regsvr32 msvcp110.dll kukhonsoli yomyalelo).
Uma lokhu kungakusizi, kuzodingeka wenze ngokuhlukile. Indlela engcono kakhulu ukuthayipha inhlanganisela ye-sfc / scannow emgqeni womyalo. Lona ngumyalo ovuselela ngisho lezo zakhi ezingenakuthola ngendlela ejwayelekile.
Ngakolunye uhlangothi, uma kungekho ifayela elifunayo kwisigaba esifunayo, inguqulo engalungile yomphumela ngeke inikeze (isimiso nje asiqapheli into). Lapha kungcono ukusebenzisa izinsiza ezifana ne-Microsoft Fix It, ezenzelwe ngokukhethekile ukulungisa izinkinga nge-intanethi. Ngemuva kwalokho, kufanele ufake futhi usebenzise iphakethe le-DLL Suite. Futhi lapha ulandela imitapo yezintambo ze-DLL ezingekho, ngokusho kohlobo olufakiwe lwesistimu.
Ngokuyisisekelo, lokhu kuyiphutha msvcp110.dll. Okufanele ukwenze kakade kucacile. Kodwa! Ukubuyiselwa kwefayela oyifunayo akufanelekile ukukwenza ngokulikopisha noma ukulanda kusuka emithonjeni engaziwa, ngoba i-DLL iningi livezwe kumakhodi anonya namagciwane.
Futhi-ke udinga ukwenza isinqumo. Yebo, ungena ohlelweni lokubhalisa futhi lapho ungakhubaza konke okudingayo. Kodwa lokhu kubhekene nemiphumela, ngoba ungaphazamisa okhiye ngokungalungile ngaphandle kokwenza ikhophi yokuqala yokubhalisa noma iphuzu lokubuyiselwa kwesistimu, okuyinto ehlukumeza kakhulu ukusebenza kwekhompyutha yakho noma i-laptop. Ngokuvamile, akufanele uthathe izingozi.
Futhi kumelwe siqonde ukuthi akuzona zonke izici ezihlobene nalelabhulali ezibhekwa lapha. Isibonelo, uma evezwa kumagciwane, yiwona namabhulali akhe afanayo ahlaselwa kuqala. Akusho ukuthi noma yimuphi umsebenzisi kufanele athathe izinyathelo zokuqapha, kodwa lokhu kusebenza kuphela ekusebenzeni kwakhe, akukho lutho. Kuzo zonke, njengoba sekuvele kucacile, azikho izinkinga. Futhi iyiphi indlela yokuyisebenzisa ukuxazulula inkinga, kufike kumsebenzisi.